မိတ်ဆက်ပါတယ်။ - MYSTERY ZILLION
Aungphowai March 2011 edited March 2011 in Intro Myself ကျွန်တော်က အောင်ဖြိုးေ၀ပါ။mz ကိုအခု မှ စသုံးဖြစ်တာပါ။ကျွန်တော်က အမေးအမြန်း ထူပါတယ်။ ကျွန်တော် မသိတာလေး တွေကို ဖြေပေးတဲ့ mz members အာလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။အာလုံး ကျန်မာကြပါစေ။ မှတ်ချက်များ
zawtk March 2011 edited March 2011 Registered Users မိတ်ဆက်တယ်ဆိုတော့ ကြိုဆိုပါတယ်ဗျာ။မသိတာရှိရင်တော့မေးပါ။ သိတဲ့သူ သက်ဆိုင်တဲ့သူ တွေ ဖြေပါလိမ့်မယ်။ K March 2011 edited March 2011 Moderators Welcome bro. InJ3ct0r March 2011 edited March 2011 Registered Users Welcome dude...Be happy in MZ Sign In or Register to comment. Powered by Vanilla